सकियो प्रचण्डको ‘क्रेज’ : अब ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव - Sutra News
सत्तारूढ एमाले, विद्रोही एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाबीच देखिएको राजनीतिक रस्साकास्सीबीच मध्यावधी चुनाव हुने विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
माओवादी केन्द्र तयार नभएपनि कांग्रेस र जसपा दुवै चुनावका लागि तयार देखिएका हुन् ।
जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘केपी ओली बाहेकको सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा राम्रो भन्ने उहाँहरु को मनमा छ तर हाम्रो माग पूरा गर्न केपी ओली तयार देखिएकाले तत्कालै हामीले निर्णय गरिहाल्ने स्थिति भने छैन ।‘
उसो त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मध्यावधि निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् । आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा आफूनिकट नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले तत्काल निर्वाचनको आवश्यकता औंल्याउने गरेका हुन् ।
देउवानिकट मानिने वागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘सभापति देउवा अहिले कुनै हालतमा नयाँ सरकार बनाउन तिर लाग्नुहुन्न । उहाँलाई पार्टीको चिन्ता छ । अबको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कसरी बहुमत ल्याउने भन्नेमा उहाँ फोकस हुनुहुन्छ ।‘
बानियाँले सत्तापक्षमा रहेकाले गराएको चुनाव कहिल्यै नजितेको उदाहरण राख्दै भने, ‘अहिलेसम्म जो सत्तामा छ, त्यसले गराएको चुनाव आफैंले जितेको छ ? छैन । सभापतिज्यूले त्यसलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ । अब चाहे रेगुलर निर्वाचन होस्, चाहे मध्यावधि होस्, कांग्रेस सत्तामा हुँदैन ।‘
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस नै नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि अघि नसरेपछि माओवादी केन्द्रलाई तनाव थपिएको छ ।
जसरी पनि ओलीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी कदम चालिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला दोहोरो तनावमा देखिन्छन् ।
केही साता अघि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि उत्साहित भएका प्रचण्ड देउवाको यो रणनीति बुझेपछि सेलाएका छन् ।
शुक्रवार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको भेटवार्तापछि प्रचण्ड झन् निराश भएका हुन् । आफूनिकट नेता कार्यकर्तासँग प्रचण्डले भन्ने गरेका छन् – ‘ओलीसँग नसकिने रहेछ, उनले संसदीय राजनीतिको सम्पूर्ण हत्कण्डा प्रयोग गरे । राजनीतिमा नैतिकता नहुने रहेछ ।‘
शनिवार बिहान प्रचण्डनिवास पुगेका एक प्रभावशाली नेताले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘अदालतले एमाले र माओवादी छुट्याउने फैसला नगरेको भए अहिलेसम्म ओली कहाँ पुग्ने थिए, तर सबै सेटिङमा काम भएको रहेछ । पार्टी एकतालाई ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने भर्यांङ बनाएका थिए भन्ने पुष्टि भयो । तर पनि माओवादी केन्द्रले यो देशको राजनीतिक भविष्य डोहोर्याउँछ ।‘
तर उनले अब कसको सरकार बन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा भने मौन रहे ।
अब के हुन्छ त ? यसबारे केही विश्लेषण गरौँ
पहिलो त एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने भनेर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नै फैसला गरेको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार बनाइरहेको दल विभाजन भएमा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता ओलीले टारेका छन् । ओलीले संवैधानिक मान्यताअनुसार प्रतिनिधि सभा बाट विश्वासको मत लिएनन् ।
तर माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली अल्पमतमा पर्ने र पुनः संसद विघटन गर्न सक्ने भयका साथ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको हो ।
तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने त्यसो नहुने बताएका छन् । सूत्रन्यूजसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘एकपटक अदालतबाट विपरित फैसला आइसकेपछि ओलीले झट्टै त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैनन्, बरू यहाँ माओवादी केन्द्रको डर बढी देखियो ।‘
श्रेष्ठले भनेजस्तो हो भने माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड बढी नै डराएका देखिन्छन् । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली विश्वासको मत लिन संसद छिर्छन् ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाबाट उनलाई विश्वासको मत प्राप्त हुनेछैन । त्यसपछि राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन् ।
ओलीले पुनः एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा ओली सफल हुने छैनन् । त्यसपछि संसद विघटन हुन्छ । ओली नै नयाँ चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
ओलीले नै चुनाव गराउनु कांग्रेसका लागि पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ, तर विकल्प भने देउवाले दिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रका लागि भने ओलीले चुनाव गराउनु निकै अप्ठेरो सावित हुनेछ ।
मधेशवादी दलका लागि ओलीले केही माग पूरा गरिदिनेछन् । संविधान संशोधन फेरि पनि पूरा हुने छैन । दुईतिहाइ आउने कसैको छैन । फेरि पनि सत्ता समीकरण चेन्ज हुने देखिन्छ ।
प्रकाशित :बैशाख ४, २०७८ शनिवार - ०८:१७:४२
# प्रचण्डको ‘क्रेज’
# ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव